Zeziphi iintlobo zeetayiti eziqhelekileyo zokubopha inethiwekhi?
1. Isakhelo somgcini womnatha womnatha wesakhelo somthi sikwabizwa ngokuba “luhlobo lwesakhelo somnatha wendlela yokunyusa intsimbi”, “isakhelo sokwahlulahlula isakhelo” njalo njalo. Yindibano yemveliso ebhetyebhetye kakhulu, isakhelo se-guardrail net sisetyenziswa ngokubanzi, esidumileyo kunendawo yokugcina izinto ngokubanzi, ...
Ububanzi besicelo somnatha wokukhusela ucingo
Ucingo oluhlabayo, olukwabizwa ngokuba ngocingo lomnatha wocingo, umnatha wokwahlula ucingo, umnatha wocingo. Ngaba iseti yokhuseleko, intle, ukhuselo lokusingqongileyo, iyasebenza kuhlobo olutsha lomnatha wocingo. Izinto zocingo zothango zenziwe nge welding ngekhwalithi ephezulu yentsimbi yecarbon, Ukuhlelwa ngonyango lomphezulu: ucingo olumnyama olukhusela ...
Ucingo oluhlabayo kuphuhliso loshishini lokwakha
Ngoku ishishini lokwakha likhule ngokukhawuleza. Abanye abaphuhlisi bezakhiwo ezinkulu basebenzisa iindlela ezintsha zokwakha kwizakhiwo eziphakamileyo, iindibano zocweyo nakwezinye iindawo. Ukusetyenziswa kweminatha yolwakhiwo, ucingo oluhlabayo kunye neminye iminatha ukubuyisela ukubopha ngesandla kwerebar kuye kwasetyenziswa kakhulu kwi-construc ...